G! qalabka, fududeynta isticmaalka Bentley Map - Geofumadas
Abriil, 2010 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, egeomates My
Maalmo yar ka hor ayaan bilaabay horumar .net Visual Basic ee Microstation, oo aan rajeynayo inaan xalliyo xaddidaadda Bentley Map, oo leh Maamulaha Geospatial. Taas awgeed, waxaan qabsaday arday da 'yar oo aan ku bilaabanay geofumar xfm marka ay ka soo baxday jilicsan, oo leh cappuccino wanaagsan iyo amareto waxaan ka helnay isbeddelada ka yimid V8i ayaa lagu fuliyay "Bentley Map Basicamentals" y "Maamulaha Khariidadda Bentley".
Taasi waa mid fudud, Bentley waxay rabtaa inay ahaato CAD oo ah GIS, iyo inkasta oo ay leedahay aqbalaad wanaagsan ee mashruucyada cadastral, waa inay jabiyaan caqabadaha isticmaala caadiga ah marka ay la kulmaan Bentley Map markii ugu horeysay. Isticmaalaya ESRI, Manifold ama AutoCAD Map, oo doonaya in uu sameeyo mashruuc isaga u gaar ah, ayaa iibsanaya xirmooyinka la qaybiyaha qaybaha ka dib markii mudada akhrinta bukaanku ogaanayo inuusan ogayn meesha laga bilaabo.
Sidaas awgeed, way imanaysaa G! Qalabka loogu talagalay Bentley Map, xal aan rajeynayo inaan diyaar u ahaado dhawr bilood oo waxaan ku ordi doonaa PowerMap, oo ay tahay in ay suurtagal tahay in la bilaabo mashruuc Bentley Map, iyada oo aan la isticmaalin Maamulaha Geospatial. Mid ka mid ah meelaha soo jiidashada waa in ay soo saari doonto qaybo template ah oo mashruuc ah, lakabyo iyo guryo hore loogu abuuray, iyo tusaala ah degmada degmada ee isticmaalaha si loo go'aamiyo waxa la qaadanayo, tuuro ama abuuro cusub. Waayo, hadda waan idin hor dhigay,
Fikraddu waxay ku jirtaa qaybteeda hore, waa siyaabaha u oggolaanaya mashruuc template, oo ka socda dhinaca khariidada, si loo dhiso waxa uu u baahan yahay iyada oo aan galin Maamulaha Geospatial. Waxyaabaha ay ka mid yihiin wax ka qabashada ArcMap waxa laga sameeyo ArcCatalog, si loo dhiso sida lakabyo waxay ka dhigan tahay qaab dhismeedka xml oo diyaar u ah inuu ku shaqeeyo oo ku xiro xogta dibedda.
Tani waxaan u qeexay shan shay oo tusaalahan aan ku tilmaamayo:
Macluumaad guud: Halkan waxaad dooran kartaa magaca mashruuca, faylka abuurka iyo xiriirinta macluumaadka dibadda. Tani waxaa la abuuraa qorshe xml ah, iyo goobta shaqada, tusaale ahaan: Kaaliye Kaaliye, kuwaas oo isticmaali doona oo kaliya taxane ah lakabyo oo aan dhamaanba madaxa madaxa waa arki doonaa.
Categories: Qaybtan, waxaad dooran kartaa, liiska qaybaha hore loo asaasay, kuwa daneynaya. Tusaale ahaan, Cadastral, hydrography, wadada iyo maamulka. Inaad karti u yeelato inaad abuurto kuwa cusub.
Fasallada (muuqaalada): Laga soo bilaabo qaybaha la doortay, waxaad dooran kartaa fasaladaas oo daneynaya, tusaale ahaan:
category Cadastral, kaliya lakabka of blocks iyo dhismayaasha, category hydrography kaliya faasas webiyo iyo durdurro leh, lakabka waddooyinka sumadaynta jidadka iyo xaafadaha lakabka Maamulka, goobaha iyo wareega magaalooyinka.
Guryaha fasalka: Halkan, adoo tixgelinaya fasalada la soo xulay, waxaad qeexi kartaa ama bedeli kartaa waxyaabaha gaarka ah ee fasal kasta, tusaale ahaan:
dhismayaasha Class: line orange, dheregtaan huruud ah, 50 hufnaan%, iyadoo sifo iyo cadastral soo galo oo muhiim ah, la mid ah sida furaha aasaasiga ah, sawiro wadada oo ku xiran via ODBC miiska avaluocat ee database MySQL ah iyo ciidamo ka mid ah isticmaalka tiirar, tayada fasalka, ku qiimaysay, iwm
Qeybta Cimilada Magaaladda: Khadka Bannaanka, Buuxinta Nalalka Bariiska, Miisaanka 2, Qalabka: Sannadle oggolaansho, aag, wareega, sanadka xaddidaadda, xayiraadaha dadweynaha. Xayiraadaha la xidhiidha nooca isugeynta domain iyo dusha sare ee dukumeentiga.
Waa tusaaleyaal, ugu dambeyntii, maxay noqon lahayd qaybaha, fasalada iyo guryaha diyaar u ah inay dhisto xogta. Waxay ku jiri doontaa oo kaliya in aan doorto in aan ka shaqeyn doono lakabka guryaha ee mulkiilaha, si aan u sawirno shayga iyo dhammaadka iyada, foomka ayaa kor u kacay si uu u galo code cadawga. ... kaliya dhis!
Marka, markaad la tashaneyso sheyga, waxaan kor u qaadi lahaa sifooyinka dhismaha, ee ku yaala iskuxiryada lagu tilmaamay miiska la xiriira, xiriirka sawirrada la xiriira, iwm.
Maxaa dheeraad ah
Hadda, saynisyahanku way i xiiseeyeen, laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan isku daro shaqooyinka GIS ee Bentley Map soo bandhigto oo horumariso qaar aan ahayn mid waxtar leh. Iyaga oo aan illaabin waxa juquraafi ah ee ay sameeyeen iyo waxa weli lagama maarmaanka u ah, sida loo kala wareejiyo, looga saaro ama loo dhajiyo sifooyinka, cusbooneysii aagga / wareega xml, isku xirka Google Earth, soo dejinta sifooyinka ...
Waa funny, in sida aan u shaqeeyo, waxaan ogaanay in Bentley uu ka fekeray wax walba markii uu xml xayiray V8 dgn, qiiq weyn oo ka timid 2004, mowduucyo uu filayay inuu xalliyo Iska jir Ma aqaan haddii aan soo xaadiri karo sababtoo ah casumaadda rasmiga ahi waxay timaaddaa faa'ido daro. Ka dibna Bentley Map waxaa lagu dhaqmaa wax kasta oo ka mid ah isticmaalaha GIS-ga, nasiib darro maaha mid ka mid ah macquulka muuqda ee isticmaal aan khaas aheyn ama ka yimid nooc ka mid ah software-ka.
Dhibaatadu waa mid xiiso leh, halkaan ayaan kuu sheegi doonaa.
Post Previous«Previous Waa maxay PlexEarth 2.0
Post Next Xaqiiji xogta ku saleysan sahan sax ahNext »